Ogaden News Agency (ONA) – Heybad Taariikhi Ah Soo Degitaanka Gudoomiyaha ONLF & Wafdigiisa Ee Adis Ababa Iyo Jigjiga- By: Xaaji M/rashiid.
Heybad Taariikhi Ah Soo Degitaanka Gudoomiyaha ONLF & Wafdigiisa Ee Adis Ababa Iyo Jigjiga- By: Xaaji M/rashiid.
Posted by Dulmane	/ December 5, 2018
Halgankii caanka ku ahaa Qori isu dhiibka ee mudada qarniyada ah kasocday Dhulka Ogadenya wuxuu soo maray marxalado kala duwan. Waqtiga oo dheeraa awgii wax hogaanka usoo qabtay madax kala duwan. Waxaa kolba isbadalayay magaca halganka, laakiin hadafku marna isma badalin. Guusha halganka waxaa cadeyn u ah Heybada Taariikhiga ah ee saaran Gudoomiyaha Jabhadda iyo Wafdigiisa.
Halganka waxaa isu taagay aqoonyahano ka hirgaliyay Qaaradaha shanta ah
maadaama ay jireen dad farabadan oo wadanka udhashay oo qurbaha daadsanaa. Ku dhawaad lix sano oo wadahadalo usocdeen Itoobiya iyo ONLF waxaa lagu guulaystay in heshiis lagu kala saxiixdo wadanka Eriteriya caasimadiisa Casmara. Iyadoo jabhaddu fulineysa heshiiskaas taariikhiga ah ayay Madaxda sare ee Halganku kasoo dageen 1-December- 2018 Gagida caalamiga ah ee Adis Ababa iyagoo kasoo kicitimay Dalka saaxiibka layahay ee Eriteriya.
Waxaa wafdiga hogaaminayay Gudoomiyaha Jabhada Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Wafdigu waxay kala kulmeen dhanka dawlada Federaalka itoobiya iyo Madaxda Degaanka SomaliState soo dhaweyn heer sare ah. Markuu wafdigu dhameystay booqasho habeen iyo maalin ah wuxuu u duulay isla labadii bishan dhankaa iyo degaanka soomaalida gaar ahaan caasimadiisa Jigjiga. Waxaa wafdiga socdaalka ku waheliyay madax sare oo kamid ah dawlada Kenya waxayna ka dageen Garoonka diyaaradaha ee Wiil-Waal halkaas oy ku sugnaayeen Dadwayne aad ugu faraxsanaa imaatinka madaxda JWXO.
Waxay sidoo kale dadwaynuhu soo buux dhaafiyeen Garoonka kubadda cagta ee magaalaga jigjiga. Heerka xamaasada waxaa lagu matali karaa midka ciyaaraha aduunka gaar ahaan ciyaarta loo yaqaano kubadda cagta faynalkeeda ee koobka Dahabka ah lagu kala qaato. Sidaas oo kale ayay soomaalidu ku ahaayeen Garoonka. Waxaa la odhan karaa waxay jabiyeen Rikoodhkii kalgacalka ee taageeranimo! Run ahaantii aad baan u bogaadinayaa shacabka Soomaalyeed ee kartida dheeradka ah muujiyay.
Arinta iila yaab badani waxay aheyd isjaceylka dhexyaala guud ahaan umadii goobta isugu timid wuxuuna ahaa jawi ku cusub guud ahaan Geeska Afrika. Waxaa lagu tilmaami karaa inay aheyd arin xaga Rabi katimid oo umadan loogu naxariisatay. Waxaa halkaa laga fahmi karaa in guulo intan kasii waawayn la gaadhi karo hadii midnimada maanta dhacday lagu sii wado. Ilaahay baa Saxaabadii Rasuulka ugu manna,sheegtay kadib colaad fool xun oo dhexdooda soo martay- ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) Bal xusuusta nicmada Rabi dushiina yeelay, waa idiinkii colka ahaa ee ilaahay quluubtiina isu dumay, markaasaad nicmada Alle darteed walaalo ku noqoteen, waase mid umad walba lagula hadlayo!
Isku soo wada duuboo shicaarka ama halkudhiga soo dhaweynta ayaa ahaa- Magaceena oo maanta wada jiriyo, Midnimaa wanaag iyo sharafba mudan!.